Global Voices teny Malagasy » Matahotra Amin’ny Fisian’ny Herisetra Ara-nofo Ao Amin’ny “Action Hero” Ireo Vehivavy Ao India · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Oktobra 2013 5:23 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsimo, India, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Tetikasam-piarahamonina tantanin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo izay mikendry hiatrika ireo herisetra ara-nofo imasom-bahoaka, na ny fanorisorenana ny vehivavy araka ny ahafantarana azy ao India ny Blank Noise , ka namoahana lalaon-javamisy antsoina hoe “Action hero (Fihetsika mahery fo)” natao hiadiana ny tahotry ny vehivavy Indiana marobe ao an-tanàndehibe.
Araka ny filazan'ny bilaogy proj Export ect , na iza na iza na olona firy na firy dia afaka mandray anjara amin'ny lalao, izay afaka lalaovina miaraka manerana ny tanàna, firenena, tanàndehibe mpiray hasin'ora (fuseaux horaires). Tokony hanana kaonty Twitter sy finday ny mpilalao mba hahafahany mandray hafatra misy ireo torolalana sy ny asa atao, ary tokony amin'ny toerana tsy mahazatra ny mpilalao no hanombohana izany.
Nanazava ny antony ilavana ny lalao ny habaka (tranonkala):
Ao amin'ny Blank Noise, nivalampatra nampiasa ny sehatry ny habaka isika mba hamolavola resadresaka momba ny lohahevitra herisetra ara-nofo. Nanambara ny hetsika izahay, manamafy ny fandraisan'anjara, miasa hampitombo ny fiarahamonin'ny lahy sy ny vavy izay misahana sy mandray andraikitra amin'ny herisetra ara-nofo. Mirotsaka manerana ny sehatra rehetra amin'ireo karazana media marobe izahay (hetsika fandefasana sioka mivantana / t shirts / afisy /fametrahana fanamafisam-peo / resadresaka) saingy miankina tanteraka amin'ny habaka mba handefasana fijoroana vavolombelona momba ny herisetra ara-nofo. Misy ireo sehatra sy fiarahamonina tsy afaka idiran'ity bilaogy ity. Izany ihany koa no antony hianteheranay aminareo.
Sarin'ny Blank Noise. CC BY-NC-SA 2.5
Jasmeen Patheja, Mpamorona ny Blank Noise, nanazava tsara kokoa ny lalao tao amin'ny Indian Express  :
Ny lalao “action hero” dia natao hiadiana amin'ny tahotra ary hahatonga ireo mpilalao ny “action hero” hahafantatra tsara ny fisiany ao amin'ny tanànany. Amin'ny alalan'ireo «andraikitra sy fanamby», manome fitondratena vaovao izany, amin'ny fananganana fikambanana vaovao sy tantaram-piainana miaraka amin'ny sehatry ny daholobe.
Nanazava tsara kokoa izy tao amin'ny Deccan Chronicles : She further explained to the Deccan Chronicles :
Nanazava i Jasmeen Patheja, tompon-kevitra tamin'ny Blank fa tsy mitondra mankany amin'ny “fahatsiarovan-tena ho voaaro” ny fahavononana hiaro tena sy ny ho mora taitra be loatra raha namorona ity hevitra ity izy. Hoy izy: «Manome fiarovana ny tenantsika isika amin'ny fahaiza-miaro fa tsy amin'ny fizàrana.” Manantena ny tetikasa fa hanana fahafahana sy tanjaka hitarika fiovana eo amin'ny fiarahamonina ny olona tsirairay avy.
Tamin'ny 5 Oktobra 2013, nolalaovina tao amin’ireo tanànan'i India ny lalao :
Namariparitra ireo andraikitra nomeny sy ny fomba namaliany izany i Anjali Manakkad avy eo Bangalore. Ny hipetraka sy hibanjina eny amin'ny rahona no andraikiny faha-efatra:
Nandeha namonjy seza iray teny an-dalana aho ary navelako teo akaiky teo ny fankàtsariko ka nitsotra naka aina aho ary nibanjina ny lanitra ny lohako. Tena nilamina tokoa nandritra izany ary tsy mba nisy olona nijierijery ka naneso ny fihetsiko. Tsy fantatro raha nisy olona nahatsikaritra ahy marina satria nihiratra matetika aho. Saingy tena fantatro tsara fa tsy nisy olona nitsikanikany na niresaka momba ahy satria nahare olona mandeha tongotra mandalo eo akaikiko saingy tsy manao na inona na inona izy ireo.
Laura Valencia , mpandray anjara, naneho hevitra tamin'ny lahatsoratry ny The Alternative:
Tsotra ireo torolàlana voalohany. Nandeha an-tongotra manasavilivily tanana aho, naka toerana ary nipetraka tsara, ary niresaka fohy tamin'olo-tsy fantatra. Nandeha ny fotoana, hitako fa tsy variana tamin'ny fijerena raha misy ny torolàlana vaovao tonga satria renoka tao anatin'ny lalao aho. Teo amin'ny adiny roa teo no nahitako ny toerako vonjimaika falifaly raha nitsangana teo antsisin-dalana sady nivanivany.
Lalao Action Hero 1. Sary avy amin'ny Blank Noise. CC BY-NC-SA 2.5
Tao amin'ny bilaogy Blank Noise Action heroes , nizara ny fihetseham-pony ireo mpandray anjara:
Ash,  nandray anjara tamin'ny “Action Hero” nihevitra hoe:
Ny tena mahafinaritra tamin'izany rehetra izany dia ny fihetsitsika amin'ny ankapobeny. Izany no zavatra nantenainay vehivavy hiainana. Afa-mitsahatra amin'ny [fanekena] hitsilany fotsiny isika vehivavy “maoderina”, ka handray fepetra raha ilaina. Kanefa kosa, zavamisy mampalahelo fa anisan'ny zava-iainana andavanandro ny fanorisorenana vehivavy. Manasokajy ny tenanay ho manam-bitana kokoa izahay Bombayita izany fa tsy tahaka ireo rahavavinay ao Delhi – izay mamihi-tratra sy mandranirany hoho maranitra amin'ny andaniny sy ankilany!
Amin'ny 19 oktobra 2013 indray ny lalao manaraka. Raha hisoratra anarana maimaim-poana, mandefasa mailaka amin'ny blurtblanknoise@gmail.com.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/10/17/53070/
 bilaogy proj: http://blog.blanknoise.org/2013/10/action-hero-game-faq.html
 ireo tanànan'i India : https://maps.google.com/maps/ms?msid=208063020992111106846.0004e7e8b60033e096cf2&msa=0
 Namariparitra ireo andraikitra nomeny : http://www.behance.net/gallery/Blank-Noise/10742181
 bilaogy Blank Noise Action heroes: http://actionheroes.blanknoise.org/